October 24, 2020 - Padaethar
ဘယ်မိန်းကလေးမဆို တမ်းတမ်းစွဲဖြစ်သွားစေနိုင်သည့် နည်းလမ်း (၈)ခု
October 24, 2020 by Padaethar
သင့်အနေနဲ့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ဖြစ်ချင်ပါသလား။ ဘယ်မိန်းကလေးတွေကမဆို ကြွေသွားစေနိုင် လောက်တဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ စိတ်ထားမြင့်မြတ်တာကနေစပြီး ပျော်ရွှင်တတ်တာအထိ လိုက်နာ စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲကမှ မိန်းကလေးတိုင်း သင့်ကိုတမ်းတမ်းစွဲဖြစ်နေစေဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်(၈)ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁။ သူမနဲ့တစ်ခါလောက် သေချာချိန်းတွေ့ပြီး လျှောက်လည်ပါ။ ဒီလိုချိန်းတွေ့နေချိန်မှာ သူမကိုအမှန်တကယ် မြတ်နိုးချစ်ခင်ကြောင်း ပေါ်လွင်ပါစေ။ ပြီးရင် ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင် သူမကို ရှောင်နေလိုက်ပါ။ သူမကသင့်ကို မျှော်နေပါစေ။ ၂။ သင့်ရဲ့ဘ၀က ပြီးပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတာကို သူမ သိပါစေ။ သင်က ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနေတယ် ဆိုတာကို သူမ သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ဘ၀ဟာ သူမအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်လေလေ၊ သူမအနေနဲ့ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် ပါဝင်ချင်လာလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၃။ လျို့ဝှက်ဆန်ဆန်ဖြစ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ သင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အားလုံးကို သူမသိတယ်ဆိုတာမျိုး … Read more
ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကိုတကယ်မချစ်ဘူးဆိုတာသိနိုင်မယ့်အချက်တွေ ဘယ်မိန်းကလေးမဆို ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာပဲလိုချင်ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာသိတဲ့အတိုင်း ခုတွေ့ ခုကြိုက်သွားကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဆိုတော့ တကယ်ချစ်တာလား အပျော်တွဲတာလားဆိုတာကို ဒီအချက်တွေနဲ့စစ်ကြည့်လိုက်ရအောင် ၁။ ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးတည်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မိတ်ဆက်မပေးထားဘူး။ ကိုယ်က မိတ်ဆက်ပေးပါလို့ပြောရင်တောင် နောက်မှမိတ်ဆက်ပေးမယ်လို့ပြောရင်တော့ သူဟာကိုယ့်အကြောင်းကို အသိမိတ်ဆွေတွေကိုတောင် ပြောပြမထားဘူးလို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ ၂။ ကိုယ့်ဘက်ကချည်း အမြဲဖုန်းစဆက်ရတယ်။ ချစ်သူတွေစဖြစ်ပြီးတည်းက အမြဲတမ်းကိုယ့်ဘက်က စဆက်ရတယ်။တစ်ခါတလေဖုန်းစဆက်ပါလားလို့ပြောကြည့်ပါလား။အလုပ်ရှုပ်နေလို့၊ဘေလ်မရှိလိုအကြောင်းပြချက်မျိုးစုံဖြေပါလိမ့်မယ်။ ယောက်ျားလေးဘက်ကချည်းစဆက်ရမှာလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။နားလည်မှုလေးထားပြီးတစ်ယောက်တစ်ရက်စဆက်ကြပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ်က သူ့အတွက် အရေးမကြီးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ ၃။ ဂရုမစိုက်တာ။ နေမကောင်းဖြစ်ရင်တောင် နေကောင်းအောင်နေလို့ပဲပြောပြီး မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။တကယ်ချစ်တဲ့သူကတော့ ဆေးခန်းထိလိုက်ပို့ပေးမယ်၊ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အစားအစာတွေရှောင်ခိုင်းပြီးသေချာဂရုစိုက်မှာပါ။ တစ်ချို့ယောက်ျားလေးတွေက နှုတ်က ဂရုမစိုက်တတ်ပေမဲ့အလုပ်နဲ့သက်သေပြတတ်တာပါ။အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ တကယ်မချစ်ဘူးဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ ၄။ ကိုယ့်အပေါ် သဝန်မတိုတာ။ တကယ်ချစ်တဲ့သူတိုင်းးအနည်းနဲ့အများတော့သဝန်တိုကြပါတယ်။မိန်းကလေးတွေကကိုယ့်ချစ်သူသဝန်တိုတာကိုခံချင်ကြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ချစ်သူကတော့သဝန်တိုဖို့နေနေသာသာကိုယ်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်တွေသွားတယ်ဆိုတာတောင်မမေးဘူး၊ စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်တော့တကယ်မချစ်ဘူးဆိုတာသိသာပါတယ်။ယုံကြည်ပေးထားလို့ သဝန်မတိုဘူးဆိုရင်တောင် ကိုယ်ပေါင်းနေတဲ့သူငယ်ချင်း၊အပေါင်းအသင်းက ကောင်းလား၊ဆိုးလားကိုတော့ စိတ်ဝင်တစားရှိသင့်ပါတယ်။ ၅။ ချစ်တယ်တဖွဖွပြောနေပြီး တကယ်တမ်းအပြောသာရှိတာ။ တကယ်ချစ်တဲ့သူဆိုရင် ကိုယ့်ချစ်သူအကြောင်းကို … Read more
ဒီလိုဆိုရင်တော့ သင်က အချစ်ရေး မှာ ကံဆိုးတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါပြီ
အချစ်ဆုိုတာ တကယ်ကုိုကြည်နူးစရာခံစားချက်လေးပါ။ သင်ဟာစစ်မှန်တဲ့ Relationship တစ်ခုကုိုပုိုင်ဆုိုင်ထားသူဆုိုရင် ဒီလုိုခံစားချက်လေးရဖုို့ မျှော်လင့်နေစရာမလုိုပါဘူး။ အကယ်လုို့ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့တွဲနေပြီး ပျော်ရွှင်မှုမရှိဘူးဆိုရင် သူကသင့်အပေါ်မှာ အချစ်စစ်နဲ့ချစ်တာ ဟုတ်ပါ့မလားဆုိုတာ သိနိုင်ဖို့ ခုပြောပြမယ့်အချက်လေးတွေကုိုဖတ်ကြည့်ပါဦး။ ၁။ ဦးစားပေးမှု သင်က သူ့ရဲ့ ပထမဦးစားပေးမှုမှာမရှိတာမျိုးပါ။ သူကအလုပ်များတတ်တဲ့သူမျိုးဆုို သူသာသင့်ကုို တကယ်အလေးထားရင် သင့်အတွက် သီးသန့်အချိန်ဖယ်ထားပါလိမ့်မယ်…. ဘယ်လောက်အလုပ်ရှုပ်ရှုပ် သင့်အတွက် မက်ဆေ့လေးတစ်ကြောင်းလောက်တောင်မပုို့နိုင်တဲ့ သူ၊ အလုပ်ကုိုအမြဲအကြောင်းပြတတ်တဲ့သူဆုိုရင်တော့ သင့်အပေါ်အလေးထားမှုမရှိလုို့ပါ။ ၂။ သင့်ကုို Silent တွဲဖုို့ပြောမယ် တကယ်စစ်မှန်တဲ့ချစ်သူကောင်းက သင့်လက်ကုိုဆွဲပြီး လူတွေကုိုဂုဏ်ယူစွာနဲ့ သူမက ကျွန်တော့ချစ်သူပါလုို့မိတ်ဆက်ပေးမှာပါ။ အပြင်သွားပြီဆုို လူကြားထဲ သူက သင့်ကုိုရှောင်ဖယ်နေတာမျိုး၊ ခပ်ခွာခွာနေတာမျိုးတွေ ပြီးတော့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့လည်း မိတ်ဆက်မပေးပဲ တွေဝေနေတာမျိုးပါ။ ၃။ ရှေ့ရေးအနာဂတ်ကုို မပူပင်ဘူး ချစ်သူကောင်လေးက အနာဂတ်အတွက် စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေမရှိတာမျိုး … Read more
တန်ဖိုးရှိသော boys and girls တန်ဖိုးရှိတဲ့ ယောက်ျားဆိုတာ ရှောက်သီးသုပ် လိုပါပဲ… ဘယ်လောက်ချဉ်ချဉ် မြင်သူ မိန်းကလေးတော်တော်များများက သွားရည်ယိုမိမှာတော့ အမှန်ပဲလေ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်လိုပါပဲ…. ဘယ်လောက်ပဲ ဟောင်းနွမ်းနေပါစေ ပြန်ဖတ်တဲ့ အခါတိုင်း မရိုးနိူင်အောင် အရသာရှိတယ်လေ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ယောက်ျားဆိုတာ မြန်မာရိုးရာ ဝတ်စုံလိုပါပဲ…. ခေတ်တွေဘယ်လောက် ပြောင်းပြောင်း အချိန်မရွေးဝတ်ရင် အချိန်မရွေးကြည့်ကောင်းနေတုန်းပဲလေ။ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ”စိန်”လိုပါပဲ …. ဘယ်ခေတ်ပဲရောက်ရောက် ဘယ်နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူသားတိုင်းတန်ဖိုးထားဝတ်ဆင်ခံရတဲ့ တန်ဖိုးကြီးအဆင်တန်ဆာ တစ်ခုပဲလေ။ အကျင့်သိက္ခာပြည့်စုံတဲ့ ယောက်ျားတိုင်းသည် ရှားပါးသလို တန်ဖိုးကလည်း တိုင်းတာလို့မရနိူင်သော ပြည်တန်ပတ္တမြားလိုပါပဲ…. လူသားတိုင်းက မက်မောတန်ဖိုးထားခြင်းခံရတာပဲလေ။ တန်ဖိုးမြင့်မားလွန်းပြီး သိက္ခာပြည့်စုံတဲ့ မိန်းမတိုင်းသည် တွေ့ရခဲလွန်းသော ပုလဲ လိုပါပဲ…. ရှားပါးလေလေ တန်ဖိုးက … Read more